China ezipetshiweyo for Printing Lweentwngiso kunye Product | siluhlaza
Chenille Iileta / Imifuziselo
ibheji ephothiweyo / ileyibheli
3rd. Floor, Huihuang Building, Chaxing Road, Chashan Town, Dongguan City, Guangdong kwiPhondo, China
Gqwa for Printing
A patch siko sublimated (okanye umbala ibheji eshicilelweyo) yinkqubo elikhethekileyo ifumana umgangatho yokuthathwa yenyani. Inkqubo Umbala unika siko sublimated ibheji iinkcukacha zakho kumbhodamo kunye nombala elivuthayo nokucaca iithowuni nobugcisa kwaye ngokuqhubekayo. Umgangatho enamandla ebonakalayo kwezi patch lutho olufana endakha ndayibona. abaxhasi bakho, abathengi okanye amalungu umbutho wenu ngokuqinisekileyo uya isaziso kubo kwaye yiloo nto ngokutshiswa nto konke ngayo. Akukho mfuneko ukubala imibala. Imibala ar ...
A patch siko sublimated (okanye umbala ibheji eshicilelweyo) yinkqubo elikhethekileyo ifumana umgangatho yokuthathwa yenyani. Inkqubo Umbala unika siko sublimated ibheji iinkcukacha zakho kumbhodamo kunye nombala elivuthayo nokucaca iithowuni nobugcisa kwaye ngokuqhubekayo. Umgangatho enamandla ebonakalayo kwezi patch lutho olufana endakha ndayibona. abaxhasi bakho, abathengi okanye amalungu umbutho wenu ngokuqinisekileyo uya isaziso kubo kwaye yiloo nto ngokutshiswa nto konke ngayo.
Akukho mfuneko ukubala imibala. Imibala kuhambe. One ezilikhulu imibala ezi ngexabiso eliphantsi efanayo umbala omnye. Akukho iintlawuliso ezongezelelweyo esekelwe nenethiwekhi. Ukususela-10% ukuya ku-100% coverage, patch wakho ngexabiso elifanayo.
Ukushicilela ikuvumela ukuba wenze zonke iintlobo zezinto ukuba akwenzeki emfakamfele lusukwe, ezifana iinkcukacha ezifihlakeleyo kunye nemibala mda. Ukuba ufuna umfanekiso-on-a-patch oludlamkileyo, kufuneka nje ukucela ushicilelo, nto leyo evumela isigqibo obuphezulu kuyilo. Siluhlaza Badges uyazingca ukuba umenzi phambili professional UkuphucuIwa wokuprinta sublimation kudityaniswe processing nangobugcisa.
Previous: umsebenzi Patch sublimation
Next: Nguwe Crest yoshicilelo
Metal ibheji Printing
Ishicilela transfer ubushushu ngamabala
patch yoshicilelo lubelolwakho
siko patch design sublimation
© Copyright - 2010-2019: All Rights Reserved. Tips - Products lifakwe - eKhaya - Mobile Site
Chenille Varsity Letter T Patch, Chenille uPatch Iileta , Chenille Varsity Letter , Hook Ke Loop olukiweyo Badge , Chenille Letter ezipetshiweyo, ezimfakamfele ibheji, Zonke iiMveliso- 粤ICP备18108880号-1